January 2021 – " कञ्चनजंगा News "
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा पशुपतिनाथमा एक अर्बको सुनको जलप लगाइने
No Comments on प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा पशुपतिनाथमा एक अर्बको सुनको जलप लगाइने
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मूल मन्दिरको शिवलिङ्गको जलहरि सुनको बनाउने भएको छ ।पशुपतिनाथ मूल मन्दिरअघिको बसाहा र छानामा पनि सुनको जलप लगाइने कोषका सदस्य सचिव डा प्रदीप ढकालले राससलाई जानकारी दिए ।यसका लागि १४२ किलोग्राम सुन लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । जलहरिका लागिमात्र १०८ केजी सुन लाग्ने अनुमान गरिएको पनि उनले बताए ।
सुनको जलहरि र जलप लगाएका बसाहा एवं छाना ३०० वर्षसम्म परिवर्तन गर्नु नपर्ने कोषले जनाएको छ । कम्तीमा सात पुस्तासम्म पुग्ने गरी दिगो काम गर्न लागिएको जनाइएको छ ।कानूनी एवं धार्मिक विधि पु¥याएर यो काम गर्ने कोषको तयारी छ । सुनको जलहरि र जलपका लागि टेन्डर प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ ।
सुनको काम गर्ने कालीगढ कोषमै राखेर काम गरिनेछ । यससम्बन्धी विस्तृत विवरण महाशिवरात्रिअघि नै पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरिने कोषको प्रतिबद्धता छ ।१०८ ब्राह्मणबाट धार्मिक विधि पूरा गरेर काम अघि बढाइनेछ । अहिलेसम्म पशुपतिनाथ मन्दिरमा चाँदीको जलहरि छ । चाँदीको जलहरि जीर्ण भएकाले शिवलिङ्गको फेदसम्म भगवान् अर्पण गरिएको पञ्चामृत, दूध, जललगायत पुग्दा बिग्रने भएकाले पनि पवित्र धातु सुन प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको कोषले जनाएको छ ।
प्यागौडा शैलीको पशुपतिनाथको छाना र बसाहामा यसअघि पनि सुनको जलप लगाइएको थियो । विसं २०१६ अघि नै लगाइएको जलप खुइलिन थालेपछि फेरि लेपन गर्न लागिएको हो ।चाँदीको जलहरि भने त्यसअघि नै राखिएको जनाइएको छ । गत सोमबार पशुपतिनाथ मन्दिरमा विशेष पूजा एवं सवालाख दीप प्रज्वलन गर्न पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुनको जलप लगाउन कोषलाई रु ३० करोड बजेट विनियोजन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई निर्देशन दिएका थिए ।
No Comments on खोटाङमा भेटियो हलेसी महादेवमा मान्छे छिर्ने प्वाल, प्वाल भित्र छिर्न सक्ने भाग्यमानी, भाग्यमानीको हातमा पर्छ दूधका थोपा
गायक बिजय बिष्टको “ के नै गल्ती “ बोलको गीत सार्वजनिक । ( भिडियो सहित )
No Comments on गायक बिजय बिष्टको “ के नै गल्ती “ बोलको गीत सार्वजनिक । ( भिडियो सहित )
पछिल्लो समयमा केही डान्सिंग रमाईला गीतहरु चलिरहेको बेला एउटा फरक धारको गीत “ के नै गल्ती “ को भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
गीतकार नवराज कालिकोटेको सरल र मिठास शब्द संयोजनले भरिएको “ के नै गल्ती “ नामक गीत मा बिजय आफैले स्वर र संगीत भरेका छन भने संगीत सम्योजन अमृत ल्वागुनले गरेका छन ।
दिपेन भट्ट दक्षको निर्देशन तथा फराज अर्पण ले छायाँकन गरेको यस गीतको भिडियोमा स्वयम् नवराज कालिकोटे र सुजिता रसाइलीको साथमा बिनोद केसी को पनि अभिनय रहेको छ । भिडियोमा गीतको भावअनुसार नव प्रतिभा भएता पनि नवराज , सुनिता र बिनोदले न्याय दिएका छन् । एक्का कम्पनी नामक यूटूब च्यानल मार्फत गीत सार्वजनिक भईसकेको छ । गीतलाई दर्शक श्रोताहरुले मन पराइरहनुभएको भिडियोमा आएका सकारात्मक प्रतीकृयाहरुले पनि स्पस्ट पारेको छ ।
पाथिभरा माताले हामी सबैको मनोकामना पुरा गरुन, माघ १९ गते सोमबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
No Comments on पाथिभरा माताले हामी सबैको मनोकामना पुरा गरुन, माघ १९ गते सोमबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
प्रधानमन्त्री ओली हिन्दु राष्ट्र बनाउने अभियानमै लागेका हुन् त ? २३ गते हुने ओली पक्षको जनसभामा राजावादी पनि सहभागी हुने चर्चा ! के लाग्छ आफ्नो बिचार राख्नुहोस्
No Comments on प्रधानमन्त्री ओली हिन्दु राष्ट्र बनाउने अभियानमै लागेका हुन् त ? २३ गते हुने ओली पक्षको जनसभामा राजावादी पनि सहभागी हुने चर्चा ! के लाग्छ आफ्नो बिचार राख्नुहोस्
काठमाडौ । पछिल्लो समय राजावादीहरुको आन्दोलन अनपेक्षित रुपमा देश ब्यापी भयो । केही दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपति मन्दिर पुगेर क्षमा पुजा गरे ।
यस्ता घटनाक्रमलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिन्दु राज्य फर्काउने अभियानमा लागेको आरोप लाग्न थालेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले त्यसवारे मुख खोलेका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली हिन्दु राज्य बनाउने प्रयासमा लागेको आरोप लगाए । आइतबार प्रचण्ड–माधव पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा गरेको धर्ना कार्यक्रममा सहभागी उनले सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै यस्तो दावी गरेका हुन् ।
उनले प्रधानमन्त्री ओली पक्षले पुस २३ गते काठमाडौँमा गर्ने भनेको जनसभामा राजावादीहरु पनि सहभागी हुने कुरा आफुले सुनेको पनि बताए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले २३ गतेको जनसभामा नै हिन्दु राज्य घोषणा गर्ने चर्चा चलेको समेत बताएका छन् ।
‘द कपिल शर्मा सो’ बन्द, यस्तो छ कारण !
No Comments on ‘द कपिल शर्मा सो’ बन्द, यस्तो छ कारण !
काठमाडौं । चर्चित भारतीय टिभी कार्यक्रम बन्द भएको छ । कमेडियन कपिल शर्माले श्रीमती गर्भवती भएको कारण देखाउदै चर्चित कमेडी सो ‘द कपिल शर्मा सो’ बन्द गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन् । श्रीमती गिन्नी चतरथको दोस्रो पटकको गर्भावस्थामा उनीसँग समय बिताउन र हेरचाह गर्नको लागि सो बन्द गर्न लागेको उनले सबैलाई जानकारी गराएका छन् ।
यो भन्दा पहिले कार्यक्रम बन्द गर्ने जानकारी दिए पनि कारण भने खुलाएका थिएनन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा एक फ्यानले तपाईं सो किन बन्द गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिदै शर्माले भनेका छन, ‘मलाई मेरो दोस्रो बच्चाको स्वागत र श्रीमतीसँग घरमा समय बिताउनको लागि हो ।’
उनीहरुलाई अहिले बधाईको ओइरो आउन थालेको छ । उनीहरुले २०१८ डिसेम्बरमा विवाह गरेका थिए । उनीहरुको अनायरा नाम गरेकी एक छोरी छन् ।
यो पनि -शिशिर भण्डारी पहिलो पटक श्रीमती सहित मिडियामा । प्याराग्लाईडिंग गर्दै आकाशमा उड्दा शिशिर डराए (भिडियो हेर्नुस)
प्याराग्लाईडिंग गर्ने क्रममा शिशिर डराएका थिए । साँगीतिक कार्य र सामाजिक काममा व्यस् भएका शिशिर पछिल्लो पाँच दिन पाृखराका मनोरम दृश्यहरुमा रम्न गएका थिए ।
रचना रिमालसँगै उनकी श्रीमती पनि त्यस घुमफिरमा थिए ।
आइतबार जन्मेका मान्छे हुन्छन् येति धनी।जता गये पनि पैसा पैसा ।
No Comments on आइतबार जन्मेका मान्छे हुन्छन् येति धनी।जता गये पनि पैसा पैसा ।
तपाईं पैसावाल हुनुहुन्छ र आफ्नो बलबुँतामा नै पैसा कमाउने कोसिस गर्नुहुन्छ ।तपाईं कनै पनि कुरामा सम्झौता गर्नुहुन्न ।तपाईं सौन्दर्यलाई मन पराउनुहुन्छ त्यसकारण आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरु धेरै जसो प्रेम विवाह गर्ने गर्दछन् । तपाईंको रुपरंगमा तपाईंले आफूले आफैलाई भाग्यमानी नै सम्झनुपर्नेछ ।तपाईं आफ्नो सम्बन्धलाई निकै सम्मान गर्नुहुन्छ त्यसकारण मानिसहरु तपाईंको झनक्क रिसाउने बानी भइकन पनि मानिससहरु तपाईंलाई छोड्न चाहन्नन् ।आइतबार जन्मेका व्यक्ति सकारात्मक सोचका मालिक हुन्छन् र निकै विश्वसनीय हुन्छन् ।तपाईंहरु अन्र्तमुखी हुने भएका कारण थोरै साथीहरु हुन्छन् ।निकै संवेदनशील हुने भएका कारण
तपाईंहरु कसैले भनेको कुरालाई धेरै दिनसम्म मनमा लिइ रहनु हुन्छ ।तपाईंहरुमा चिन्तन शक्ति निकै धेरै हुने भएका कारण लेखन अथवा वकालतको क्षेत्रमा हुनुहुनेछ ।तपाईंहरु अरुलाई सहयोग गर्न सधैँ तत्पर त हुनुहुन्छ नै तर तपाईंको चाँडै रिसाउने बानीले तपाईंले सहयोग गर्ने व्यक्तिहरु तपाईंसँग रिसाउने गर्दछन् ।
No Comments on बिराटनगरमा प्रचण्डमाथि जुत्ता हा’नेको भन्दै तस्वीर भाइरल, यस्तो रहेछ बास्तविकता
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहको प्रदेश १ कमिटीले विराटनगरमा आयोजना गरेको विरोधसभालाई प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले सम्बोधन गरेका थिए । kavrepati.com बाट साभार
लाइसेन्स निकाल्दै हुनुहुन्छ भने फेरी आयो नयाँ नियम, अहिले आवेदन दिंदा कहिलेसम्म आइपुग्ला ?
No Comments on लाइसेन्स निकाल्दै हुनुहुन्छ भने फेरी आयो नयाँ नियम, अहिले आवेदन दिंदा कहिलेसम्म आइपुग्ला ?